NOLOSHA SOOMAALIDA BELGIUM IYO HOLLAND
Waddanka Belgium wuxuu ka mid yahay wadammada Yurubta galbeed ee ay ku nool yihiin Soomaalida ugu tirada yar ee joogta qaaradda Yurub. Wuxuu hoy u yahay Soomaali lagu qiyaaso tiradooda illaa 2,000. Belgium waxay xuduud la leedahay dhinaca koonfurta waddanka Faransiiska, dhinaca waqooyina Holland ama the Netherlands, dhinaca barina waddanka Germany, koonfur barina waxay xad kala wadaagtaa Luxembourg, dhinaca galbeedna waxaa ka xiga Ingiriiska oo ay u dhexeyso bad laysaga gudbo.
Juqraafi ahaan, Belgium waa waddan aad u yar, waxaana lagaga hadlaa luuqadaha Faransiiska, Dutch-ka Holland iyo Jarmal. Waddanka wuxuu u qaybsan yahay saddexdaas qaybood, walow Jarmalku aad uga yar yihiin labada kale. Soomaalidu waa ku soo kordhayaan Belgium waayadan dambe, marka loo fiiriyo sannadihii hore, sida uu ii sheegay Danny Vandergen oo ka tirsan hay’adda qaxootiga qaabilsan.
Sida caadiga ah, Soomaalidu waxay u yimaaddaan Belgium inay helaan sharci iyo nabadgelyo, iyadoo wadammada kale ee Yurubta kaga furfuran dhinaca sharci-bixinta. Hase ahaatee, qaxootiga ugu badan ee Belgium yimaaddaa wuxuu ka soo galaa waddankii ay horey u gumeysan jireen ee Congo DR. Si ka duwan caasimadaha kale ee Yurub, magaalada Brussels oo xarun u ah Belgium, kuma badna Soomaalidu, waxaase ay deggan yihiin hareeraheeda iyo gobollada kale ee waddanka, taasoo ay ugu xishaan nolosha iyo kirada guryaha oo raqiis ka ah.
Magaalada labaad ee waddanka Antwerpen oo ah tan ay deggan yihiin Soomaalida ugu badan ee joogta Belgium waxaa ku yaalla maqaayad iyo Super Market Soomaali leedahay. Magaalooyinka Vervia, Kortrijk, Ghent, Liege iyo Leurven ayaa ka mid ah meelaha Soomaalidu sidoo kale ku badan tahay.
Nolosha Soomaalida ku nool Belgium ma xuma marka loo fiiriyo Europe-ta kale. Dad badan ayaa shaqeeya oo misana waxbarashada ku jira, sida dhacda mararka qaar Belgium waxay tixgelisaa xirfadda qofku sheegto ama waxa ay u diraan school si loo baro xirfad uu ku shaqeysan karo, waxaa sidaas yiri Cabdullaahi Cabdi Geesdiir oo ka mid ah Soomaalida sida rasmiga ah u shaqeyso (full-time worker).
Shaqo kasta waxay ku xiran tahay dadaalka qofku muujiyo iyo luuqadda uu shaqada ku rabo oo uu barto, sida uu leeyahay Cali Xaaji Cumar (Cali Baashi) oo ka mid ah Soomaalida deggan Ghent. Laakiin, qofku wuxuu ku wareeraa aalaaba tuu hor baran lahaa luuqadaha Faransiiska iyo Dutch-ka oo lagu shaqeeyo, sida badanna shaqooyinka waxaa lagu helaa luuqadda Dutch-ka.
Dhibaatada jirtaa waxay tahay Qaadka oo si dadban waddankan looga soo geliyo dhinaca Holland, kaasoo qatar badan geliya nolosha qoysaska carruurta leh. Sida Soomaalida Europe-ta kale ku nool, dadku waxay ku nool yihiin lacagta ceyrta ah ee dowladdu siiso dadka qaxootiga ah (welfare).
Soomaalida Belgium deggan, si la mid ah Soomaalida kale ee ku nool qurbaha, waxay aad ugu dhuun-daloolaan waxa ka dhacaya waddankoodii, taas awgeed ayaa su’aalaha ugu badan ee dadku i weydiinayeen waxay ahaayeen; Soomaaliya rajo ma leedahay, shirka Kenya caqiibo ma leeyahay? Holland
Dalka The Netherlands waa waddanka mar marti-geliyey Soomaalidii ugu badnayd ee qaxooti noqota abid inta la xusuusan yahay. Wuxuu hadda u eg yahay inuu ka sii baxayo saaxada soo dhoweynta qaxootiga. Waddankan wuxuu xad la leeyahay Germany, Belgium iyo Luxembourg. Dhinaca badda-na xiriir soke wuxuu kala leeyahay Ingiriiska.
Waqtigan ma cadda tirada Soomaalida ku nool, sababtuna waxay tahay tiro badan oo ku noolayd oo u qaxay dhinaca Britain, sida uu ii sheegay Cabdiraxmaan Cali Maxamed oo aan kula kulmay magaalada Amsterdam. Illaa 20,000 oo Soomaali ah ayaa la rumeysan yahay inay Holland ka guureen oo degeen Britain, kuwa kalena hadda ayay isku diyaarinayaan inay baxaan.
Dadkaas waxaa ka mid ah	Amaal Maxamuud Khaliif oo deggan Rotterdam oo isku diyaarinaysa inay u guurto magaalada London. "Asxaabteydii ayaa u wada guurtay London, waxaan rabaa anigana inaan guuro" ayay tiri. Waxaa jira dad sharci-sugayaal ah oo iyaguna damacsan inay waddankan sii dhaafaan, waxaana ku jira dad raba inay Soomaaliya isaga noqdaan sida Jeylaani Cabdikariim oo aan kula kulmay maqaayadda Soomaalida Amsterdam.
Holland waa waddanka labaad ee la keeno Qaadka ugu badan ee yimaadda qaaradda Yurub, marka laga reebo London. Mukhaadaraadka Qaadku waa kan liddiga ku ah wax horukac ah inay sameeyaan dadku. Waxaa la yaab leh in waddankan uu dadka u fasaxay isticmaalka xashiishka iyo daroogooyin kale oo la mid ah, taasoo dhallinyarada u keentay inay noqdaan dad aan meelna degenayn.
Dhibaatooyinka Soomaalida Holland ka cawdaan waxaa ka mid ah nolosha waddanka oo adag, sharciyada oo waayadan dambe lagu dhibo, deynta faraha badan ee dadka la geliyo iyo caro isa soo taraysa oo loo hayo qaxootiga faraha badan. Soomaalida joogta waddankan waxay badanaa deggan yihiin Amsterdam, Rotterdam, Denhaag iyo Tilburg.
Baarlamaanka waddankan ayaa dhowaan waxa uu meel mariyey sharci waddanka lagaga saarayo qaxooti gaaraya 26,000. Waxaa la rumeysan yahay inay dadkan ku jiraan Soomaali fara badan oo aan tiradooda saxda ah la helin. Illaa iyo hadda ma cadda wuxuu ku dambeyn doono aayaha dadkan, inkastoo ururada u dooda xuquuqda aadanuhu, sida Amnesty iyo Human Rights Watch ay cambaareeyeen arrintaas.
Holland waxa ay Belgium la wadaagtaa qaab xun wax ku doonashada, sida dadka sheegta cuuryaannimada (handicap) ee raba in kaalmada ceyrta loo kordhiyo. Waxaad arkeysaa dad aan dhegaha la'eyn oo dhegoole sheeganaya iyo kuwo aan jiis ahayn oo cuuryaan sheeganaya, si ay lacag uga helaan kaalmada dowladda.
QORAALADII HORE EE INGIRIIS